Dhawunirodha magazini emahara: iwo 3 akanakisa mawebhusaiti muSpanish | Gadget nhau
Iyo dhijitari zera ndeyechokwadi, yezvakanaka nezvakaipa Icho ichokwadi chakaratidza kuti kushoma uye kushoma kudhinda kunodyiwa mumuviri fomati, sezvo internet iri mammoth sosi yeruzivo mukutsinhana kamwe chete kana kutsvaga. Zvichiripo mufaro iwoyo wekuverenga pepanhau chinyararire patafura yekudyira patinonakidzwa nekofi yedu kana kudya kwekuseni. Asi zviri kuwedzera kuve neichi chiitiko chimwe chete chine smartphone mune rumwe ruoko uye kofi mune imwe.
Ndinoyeuka chaizvo pandakaenda ku kiosk yangu yandaivimba nayo nechido chemagazini yangu yemavhidhiyo yemavhidhiyo nekuti pamusoro pekuti ndiyo yega sosi yeruzivo, ivo vakapa mademo kana maposta atinozonamira muimba yedu yekurara. Asi ikozvino mademo akagoverwa manhamba pasina muripo, neakakura mukana wekuvandudzwa miniti yega yega. Zvisinei, bepa, kana raive nenhau dzisina kunaka, taizochengeta ruzivo irworwo kusvika pachikamu chinotevera. Muchikamu chino tichaenda kuona nzvimbo dzakanakisa kudhaunirodha mahara emahara.
1 Zvakanakira kuverenga kwedhijitari
2 Maitiro ekudhaunirodha magazini mahara
6 Nzvimbo yepamusoro yekutora magazini emitambo
7 Yakanakisa saiti yekutora magazini kubva pamoyo
Zvakanakira kuverenga kwedhijitari
Mukana mukuru weiyi fomati ndeyekureruka kwekusaenderana nekiyoski, pamwe nenzvimbo yatinochengetera mukuchengetedza. Hatigoni kukanganwa kana kukanganisa kwezvakatipoteredza kwekudzikisa kushandiswa kwepepa yeiyo mhando yemafomati, chimwe chinhu chinoita kunge hachina basa, asi zvine basa zvakanyanya nekuti bepa chinhu chakanaka chinodiwa uye kana tikakwanisa kusevha zvishoma, tinoita nyika yakanaka.
Hatikwanise kukanganwa kunyaradzwa kwekuva nemagazini edu pane edu ese zvigadzirwa, zvisinei nekwatiri, kubva ku smartphone yedu kuenda kune yedu iPad. Iine hombe katarogi umo isu tinogona kuona chero magazini inotifadza. Chinenge chero chishandiso chine kuverenga kwePDF, iri fomati yakanyanya kushandiswa yerudzi urwu rwezviri mukati. Inobata zvishoma kwazvo saka hatizombonetseke nezvekuchengetedza kwatinako pane yedu kifaa. Isu tinogona kana kuisimudza kune gore kuti tiwane magazini tisina kudzoreredza.
Maitiro ekudhaunirodha magazini mahara
Kutsvaga kwakareruka kweGoogle kunotipa mukana wezviuru zvemanyowani ekutora pasi mafaera ePDF kubva mumagazini. Asi isu tinogara tine kusahadzika kana kutya kwekusaziva chaizvo zvatiri kurodha pasi, kunyangwe kana tiine antivirus yakanaka, inozotizivisa kana tisingatore kurodha izvo zvatinoda kurodha pasi. Mimwe yeaya masango anotora mukana wekupinda mune imwe plugin kana kuwedzerwa kweiyo browser, saka isu tinofanirwa kungwarira kana tisingade kuti kuita kwebrowser yedu kukanganisike nekuisa chimwe chinhu chatisingafanirwe.
Nekuda kweichi chikonzero tichaita sarudzo dzewebhusaiti kwatinogona kurodha pasi magazini edu pasina njodzi. Ivo vese vane hombe katarogu yekutora magazini kana mabhuku. Kuti udzivhure, isu tichafanira chete kuwana iyo webhu uye sarudza iyo faira, kungave nekuburitsa kwakananga kana nehurongwa hweTorrent hunokurudzirwa newebhu pachayo.
Webhusaiti yekutanga yatichataura nezvayo, Kiosko.net ndeye yepakutanga uye yakapusa basa rekudhinda. Iri rakananga dhamu sevhisi umo mabutiro makuru emapepanhau nemagazini akakosha kwazvo pasi ano anogona kutariswa. Iyo dhizaini ipfungwa yekutanga yeanogadzira Hector Marcos uye inoshanda kwazvo.
Pane peji rekutanga tinowana mapepanhau mashanu kubva kukondinendi yega yega, vese vari mushanduro dzeChirungu neSpanish. Iyovhavha inogona kukudziridzwa nekungofambisa iyo mbeva yekasha padyo nayo. Uye zvakare, inogona kukwidziridzwa imwezve kana tikabaya pabutiro nekiyi kubaya. Kana tikadzvanya zvakare, zvinotitora kuenda ku chinongedzo chepepanhau riri kutaurwa.
Tine sarudzo hombe yemapepanhau akanyorwa kuSpain, pakati payo patinowana mhando dzakasiyana dzatinosarudza kubva. Pakati pavo "Mazuva ese Mapepanhau", "Magazini", "Makomputa Magazini", "Tsika Magazini" nevamwe vazhinji. Pakati pezvikamu zvine mukurumbira isu tinowanawo zvemitambo magazini nemagazini emwoyo izvo pasina mubvunzo zvinonyanya kudikanwa neruzhinji rwevanhu.
Ini ndinofanira kutaura kuti peji rino rinoratidzika kwandiri kunge rimwe reakanakisa atinogona kuwana paInternet, nekuti haringotitenderi kuti tiongorore dzvinyu rese rinotaura chiSpanish, asi rinotipawo mukana wekuwana kune vekunze vekunze, saka kana tichiziva mitauro, tichava tichiziva zvese zvinoitika munyika.
Izvi hapana mubvunzo kuti ndeimwe yemakuru ari muchikamu maererano nekuverenga mutapi venhau, asi mune iyi nyaya ruzhinji zvirimo muChirungu. Iyo ine yakazara katarogu umo matinogona kuwana kudzvanya pane chero chero chidzidzo. Kutenda kune yayo ine simba yekutsvaga injini isu tichawana chero chatiri kutsvaga, kunyangwe sezvandinotaura, mhedzisiro yakawanda inogona kunge iri muChirungu.
Ehe, isu tinokwanisa kuwedzera mafirita pane zvakanzi tsvaga, pakati pazvo pane firita remutauro, saka kana tikangotsvaga mumwe mutauro, tinouwana. Pasina kupokana iyo ndeimwe yeakanakisa ePDF mawebhusaiti ekudhinda pa internet. Asi pasina kupokana Inogona kukanganisika kana isu tikangotsvaga magazini muSpanish.
Tine zvakawanda zvemukati kubva kumitambo yemagazini kana magazini eguhwa, kunyangwe zvingangodaro zvisingasviki zvachose, saka kana iwe uri kutsvaga kuve nezvazvino muSpanish, Kiosko.net zvirokwazvo iri nani sarudzo pane iyi.
Takasvika pane yangu webhusaiti yakatwasuka pane zvese, tichingopinda tinowana zvinyorwa zvitsva, mariri tinowana magazini emitambo, moyo, mota, pakati pevamwe. Iro zita chairo rewebhu webhusaiti rinoratidza kuti mune iyi nyaya zvese zvirimo zviri muchiSpanish, asi dambudziko neiri webhusaiti nderekuti zvakawanda zvirimo hazvichashandi. Kuwana 2016 magazini pakati peakakurumbira pabutiro.
Kana iwe uri kutsvaga kuti uverenge chimwe chinhu chisingagumi, iwe pasina mubvunzo unokwanisa kuisa pamhando dzakasiyana dzemagazini emota, ayo atinogona kunakidzwa pasina rusarura rwenyika. Pakati pematebhu atinofanira kusarudza zvemukati, tinowana chikamu chevanyori, marudzi uye akateedzana. Isu tinowana chero chero magazini yatinogona kufunga nezvayo, kusanganisira ma comics kana mabhuku ekubika.
Nzvimbo yepamusoro yekutora magazini emitambo
Pasina kupokana kurudziro yedu ndeyeKiosko.net, nekuti iri musika wemamirioni emadhora, akawanda masuo akavharwa, saka kupihwa kwacho kushoma. Kunyangwe muKiosko.net isu tichiwana zvese zvatinogona kufungidzira maererano nemitambo. Zvakanakisisa pane zvese, iri peji zviri pamutemo zvachose, saka hatifanirwe kunetseka.
Iyo inotibvumidza isu kurodha pasi yakawanda nhamba yemazita, pakati payo yatinogona kuwana nhabvu, motorsport, tenisi, basketball kana mitambo. Iyo katarogu inogona kuve yakaganhurirwa neichi chaicho chinhu chatakataura kare, asi tichifunga kuti chakasununguka zvachose, hatigone kuisa zvakawandisa zvakawanda pazviri.
Yakanakisa saiti yekutora magazini kubva pamoyo
Chekupedzisira tave kuzopa mareferenzi pane kurodha pasi kwePDF kwenyaya yemoyo, dingindira rinogara richikwira munyika medu. Pasina kupokana magazini emwoyo anotsvaira ma kiosk, ari emumwe eashoma anovachengeta vari vapenyu. Magazini senge Hola, cosmopolitan, interviú kana Clara vari pakati pevakakurumbira.
Tinokurudzira iwe Sravana Sameeralu Serial XNUMXth PDF Giant, portal ine yakafara katarogu yenyaya iyi, Achiita iro rimwe remapeji akakurudzirwa kwazvo. Kunyangwe ini pachangu ndichifanira kutaura izvozvo Ndichiri kusarudza Kiosko.net. Kunyangwe iwo mamwe sarudzo isu tine zvirinani, nekuti izvi zvinogona kuwanikwa kuwira pane imwe nguva, saka zvinogara zvakanaka kuve nenhamba huru yesarudzo dziripo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Dhawunirodha magazini emahara: iwo matatu akanakisa mawebhusaiti muSpanish
Amazon Fire TV Cube, simba rese muterevhizheni yako [Ongororo]